Holiday Inn Club Vacations ဧည့်သည်တော်များ၏ ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် | သတင်းအမြန်
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » သတင်းအမြန် » Holiday Inn Club Vacations သည် Guest Of Honor အစီအစဉ်ကို စတင်သည်။
အားလပ်ရက်အင်းကလပ်အားလပ်ရက်များထည့်သွင်းပါဝင်သည်နိုင်ငံတော်အားလပ်ရက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Guest of Honor သည် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တပ်မတော်သား၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများအား အခမဲ့အပန်းဖြေအနားယူခွင့်ပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ယနေ့တွင် မိတ်ဆက်ကြေညာခဲ့သည်။ Guest of Honor မိတ်ဆက်ပွဲနှင့်အတူ Holiday Inn Club Vacations သည် Vacations for Vets နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ငါတို့တပ်တွေကို ဂုဏ်ပြုတယ်။ (IHOOT) သည် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအား အခမဲ့ တည်းခိုခွင့် ပေးဆောင်ရန် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်သည့် အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်သည့် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
Memorial Day ပိတ်ရက်အစတွင်၊ မတူညီသောစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင် ကိုးဦးနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများသည် Florida၊ Orlando၊ Orange Lake Resort အပါအဝင် US တစ်ဝှမ်းရှိ Holiday Inn Club Vacations အိမ်ရာအများအပြားတွင် တစ်ပတ်ကြာ နေထိုင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Las Vegas၊ Nevada ရှိ Desert Club Resort၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Flint ရှိ ပါလက်စတိုင်းရေကန်ရှိ Villages Resort၊ South Lee၊ Massachusetts ရှိ Berkshires ရှိ Oak n' Spruce Resort နှင့်။ ဤအစီအစဉ်ကို စတင်ရန်အတွက် Holiday Inn Club Vacations သည် Club အမှတ် 10 သန်းကျော်ကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရှေ့ဆက်ပြီး ကုမ္ပဏီသည် Holiday Inn Club အဖွဲ့ဝင်များထံမှ လှူဒါန်းသော အမှတ်များ စုဆောင်းခြင်းဖြင့် စစ်အဖွဲ့ဝင်များအား အခမဲ့ တည်းခိုခွင့် ဆက်လက် ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
“Holiday Inn Club Vacations မှာ ခရီးသွားခြင်းက မိသားစုတွေကို ပိုရင်းနှီးစေရုံသာမက သူတို့ရဲ့ သံယောဇဉ်ကိုလည်း အမှန်တကယ် ခိုင်မာစေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲရင့်သောစစ်မှုထမ်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ပံ့ပိုးကူညီမှုတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့် အပ်နှံထားသောမိသားစုများနှင့်အတူ ဤအရာကို မည်သူမဆိုထက်ပို၍ထိုက်တန်ပါသည်၊” ဟု Holiday Inn Club Vacations Incorporated မှ ဥက္ကဌနှင့် Chief Operating Officer ဖြစ်သူ John Staten မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့၏ Club အဖွဲ့ဝင်များသည် အတူတကွ ခရီးသွားခြင်း၏ တိုင်းတာမရနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို အပြည့်အဝ နားလည်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဤအစီအစဉ်သစ်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။"
“ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကိုယ်ကျိုးမဖက်တဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အားလပ်ရက်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ အပန်းဖြေဖို့ အခွင့်အရေးထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် အရပ်သားဘဝသို့ ပြန်လည်ကူးပြောင်းကာ ချစ်ရသူများနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန် အချိန်နှင့်အတူ ကုသရန် အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်” ဟု IHOOT ၏တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Philip Strambler က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များထံ ဤဘဝပြောင်းလဲစေသောအတွေ့အကြုံများကို ယူဆောင်လာပေးသည့်အတွက် Holiday Inn Club Vacations နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။"
Vacations for Vets မှတဆင့် နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်၊ တာဝန်ကျသော တပ်မတော်သားများနှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများထံ သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်သည်။ ihoot.org. Holiday Inn Club Vacations နှင့် ၎င်း၏ အပန်းဖြေစခန်းများကွန်ရက်အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ holidayinnclub.com.
Holiday Inn ကလပ်အားလပ်ရက်များအကြောင်း
US ပြည်နယ် 28 ခုရှိ အပန်းဖြေစခန်း 7,900 ခု၊ 14 နှင့် timeshare ပိုင်ရှင် 365,000 ကျော်တို့ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး Holiday Inn Club Vacations Incorporated သည် အပန်းဖြေရလွယ်ကူသော၊ အိမ်ခြံမြေနှင့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မိသားစုခရီးသွားလာမှုတွင် လူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီစဉ်ပေးထားသည်။ မိသားစုကို အားကောင်းစေသော အမှတ်တရ အားလပ်ရက် အတွေ့အကြုံများ။
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ အော်လန်ဒိုတွင် အခြေစိုက်သည့် ကုမ္ပဏီသည် Holiday Inn မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် 1982 ခုနှစ်ကတည်းက အားလပ်ရက်ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။® တည်ထောင်သူ Kemmons Wilson သည် ကုမ္ပဏီ၏ အထင်ကရ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့် Holiday Inn Club အားလပ်ရက်များ၊® Orlando ၏ Walt Disney World ဘေးရှိ Orange Lake Resort တွင်® အပန်းဖြေစခန်း။
ယနေ့တွင်၊ Holiday Inn Club Vacations အပန်းဖြေစခန်းအစုစုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းတွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် Wilson မိသားစုက ၎င်း၏ အများစုပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက် စစ်မှန်သော မိသားစုတန်ဖိုးများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး တိုးတက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လိုက်လုပ်နေကာ ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်ဆက်ဆံမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲကာ ဧည့်သည်အတွေ့အကြုံကို စိတ်အားထက်သန်သော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဦးဆောင်အဖွဲ့ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ငါတို့တပ်များကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် (IHOOT)
In Honor of Our Troops (IHOOT) သည် လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် 501 ကျော်က Walter Reed Army Medical Center တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော 3c20 အကျိုးအမြတ်မယူသော ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်ခေတ် USMC အရာရှိ Philip Strambler သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ထမ်းဆောင်နေချိန်တွင်၊ အထူးသဖြင့် ထာဝရမသန်စွမ်းသူများအတွက် စစ်မှုထမ်းဘဝမှ အရပ်သားဘဝသို့ ကူးပြောင်းမှုသည် မည်ကဲ့သို့ ခက်ခဲပြီး နာကျင်ရပုံကို ချက်ခြင်း နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ . ဤလိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် IHOOT နှင့် ၎င်း၏ Vacations for Vets ပရိုဂရမ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ အင်း | Spruce | အားလပ်ရက်အင်း | သွားရောက်ရာအရပ် | ကုမ္ပဏီ
အဲလ်ဗစ်ပရက်စလေ၏ဝိညာဉ်သည် Westgate Las Vegas အပန်းဖြေစခန်းနှင့်ကာစီနို၏ဧည့်ခန်းကိုကြည့်ရှုသည်။ သွားရောက်ရာအရပ်|
စွန့်စားအပန်းဖြေခရီးဖြင့် ကလေးငယ်များကို ၎င်းတို့၏ iPhone များနှင့်ဝေးရာသို့ ဆွဲဆောင်ပါ။ သွားရောက်ရာအရပ်|
မက္ကဆီကိုရှိ ဇိမ်ခံတဲတစ်ခုတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသာ ရင်းနှီးမှု သွားရောက်ရာအရပ်|
ဘဟားမားတွင် အသစ်အဆန်း သွားရောက်ရာအရပ်|
Galapagos ကို ခရီးဘယ်လောက်လဲ Voyagers ခရီးသွားဖြေရှင်းချက်အသစ် ကုမ္ပဏီ|
ကုမ္ပဏီ အားလပ်ရက်အင်း အင်း သွားရောက်ရာအရပ် Spruce
Memorial Day Weekend အတွက် ဘေးကင်းစွာ မောင်းနှင်ရန် အကြံပြုချက်များ
ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်း၏ တန်ဖိုးကြီးပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာများနေ့
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနိမ့်ဆုံးနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လမ်းခရီးအများစု
Victoria House Resort & Spa၊ Belize၊ သီးသန့်...
ချိတ်ဆက်မှုများတည်ဆောက်ရာတွင် ခရီးသွား၏အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဒေတာအသစ်
AHLA သည် အမေရိကန်ကို ကာကွယ်ရန် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုလားသည်။
Flyers Rights- FAA သည် လေကြောင်းလိုင်း ထိုင်ခုံအရွယ်အစား စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ရပါမည်။
Alaska လေကြောင်းလိုင်းက ဘဏ္ဍာရေးဒုဥက္ကဌအသစ်ကို ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။
Commonwealth Hotels ၏ အရောင်းဒါရိုက်တာအသစ်ခန့်အပ်...
ရုရှားသည် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှ ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
Chorus Aviation သည် ၎င်း၏ Falko ကို အပြီးသတ်ဝယ်ယူလိုက်သည်...
San Jose လေဆိပ်သည် Norman ၏ အသက်နှင့် အမွေအနှစ်ကို ဂုဏ်ပြုသော...